Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 15:1-39
Tsika dzevanhu dzinofumurwa (1-9)
Zvinosvibisa zvinobva mumwoyo (10-20)
Kutenda kwakakura kwemukadzi wechiFinikiya (21-28)
Jesu anorapa zvirwere zvakawanda (29-31)
Jesu anopa vanhu 4 000 zvekudya (32-39)
15 VaFarisi nevanyori vakabva vauya kuna Jesu vachibva kuJerusarema,+ vachiti: 2 “Sei vadzidzi vako vasingachengeti tsika dzevanhu vekare? Semuenzaniso, havagezi maoko* avo kana vava kuda kudya.”+ 3 Akavapindura achiti: “Sei imi muchityora mutemo waMwari nekuda kwetsika dzenyu?+ 4 Semuenzaniso, Mwari akati, ‘Kudza baba vako naamai vako,’+ uye, ‘Munhu anotuka baba vake kana amai vake anofanira kuurayiwa.’+ 5 Asi imi munoti, ‘Munhu wese anoti kuna baba vake kana amai: “Chese chandiinacho chandaigona kukubatsirai nacho ndakachitsaura sechipo kuna Mwari,”+ 6 haafaniri kutombokudza baba vake.’ Saka makaita kuti shoko raMwari rishaye simba nekuda kwetsika dzenyu.+ 7 Imi vanyengeri, regai Isaya akazoprofita nezvenyu achiti:+ 8 ‘Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure chaizvo neni. 9 Vanoramba vachindinamata pasina, nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso.’”+ 10 Akabva ashevedza vanhu kuti vaswedere pedyo, akati kwavari: “Teererai munzwisise zvandiri kutaura:+ 11 Zvinopinda mumuromo memunhu hazvisirizvo zvinomusvibisa, asi zvinobuda mumuromo make ndizvo zvinomusvibisa.”+ 12 Vadzidzi vakabva vauya kwaari vakati: “Munoziva here kuti vaFarisi vagumbuka nezvamataura?”+ 13 Akapindura achiti: “Chinhu chese chinomera chisina kudyarwa naBaba vangu vekudenga chichadzurwa. 14 Varegei vakadaro. Ivo mapofu anotungamirira vamwe. Saka kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, ese ari maviri achawira mugomba.”+ 15 Petro akapindura achiti: “Nyatsotitsanangurirai mufananidzo wacho.” 16 Iye akati: “Nemiwo hamusati mazvinzwisisa here?+ 17 Hamuzivi here kuti zvinhu zvese zvinopinda mumuromo zvinopfuura nemudumbu uye zvinobuda zvichipinda mugomba retsvina? 18 Asi zvinhu zvese zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, uye zvinhu izvozvo ndizvo zvinosvibisa munhu.+ 19 Semuenzaniso, mumwoyo munobuda kufunga kwakaipa:+ umhondi, marudzi ese eupombwe,* umbavha, uchapupu hwenhema, kumhura. 20 Izvi ndizvo zvinhu zvinosvibisa munhu; asi kudya nemaoko asina kugezwa* hakusvibisi munhu.” 21 Achibva ipapo, Jesu akaenda kunharaunda yeTire neSidhoni.+ 22 Uye mumwe mukadzi wechiFenikiya aigara munharaunda iyoyo akabva auya, akashevedzera achiti: “Ndinzwireiwo ngoni, Ishe, Mwanakomana waDhavhidhi. Mwanasikana wangu ane dhimoni riri kumutambudza.”+ 23 Asi haana kumupindura kana shoko rimwe chete. Saka vadzidzi vake vakauya, vakatanga kumukumbira vachiti: “Mudzingei, nekuti ari kuramba achititevera achishevedzera.” 24 Akapindura kuti: “Handina kutumwa kune vamwe vanhu kunze kwemakwai akarasika eimba yaIsraeri.”+ 25 Asi mukadzi wacho akasvika akamupfugamira, achiti: “Ishe, ndibatsireiwo!” 26 Akamupindura achiti: “Hazvina kunaka kutora chingwa chevana wochikandira mbwanana.” 27 Mukadzi wacho akati: “Hongu, Ishe, asi mbwanana dzinodyawo mafufu anodonha patafura yavanatenzi vadzo.”+ 28 Jesu akabva amupindura kuti: “Imi amai, chokwadi kutenda kwenyu kukuru; ngazviitike kwamuri sezvamunoda.” Uye mwanasikana wake akapora kubvira panguva iyoyo. 29 Achibva ipapo, Jesu akasvika pedyo neGungwa reGarireya,+ uye akakwira mugomo akagara imomo. 30 Vanhu vakawanda vakasvika kwaari, vaine vanhu vaikamhina, vakaremara, mapofu, mbeveve, nevamwewo vazhinji, uye vakavaisa patsoka dzake, akavarapa.+ 31 Saka vanhu vakawanda vakashamiswa, vakakudza Mwari waIsraeri pavakaona mbeveve dzichitaura, vakaremara vachiporeswa, vanokamhina vachifamba zvakanaka, uye mapofu achiona.+ 32 Asi Jesu akashevedza vadzidzi vake, akati: “Ndiri kusiririswa nevanhu ava+ nekuti vatova nemazuva matatu vaineni uye havana chavadya. Handidi kuti vaende nenzara nekuti vangaziya munzira.”+ 33 Asi vadzidzi vakati kwaari: “Chingwa chinokwana vanhu vakawanda kudai tingachiwana kupi munzvimbo ino iri kure nekunogara vanhu?”+ 34 Jesu akabva ati kwavari: “Mune chingwa chakawanda sei?” Ivo vakati: “Zvingwa zvinomwe, nehove diki shomanana.” 35 Saka pashure pekuudza vanhu kuti vagare pasi, 36 akatora zvingwa zvacho zvinomwe nehove dzacho, akaonga, akazvimedura, akatanga kupa vadzidzi, uye vadzidzi vakazvipa vanhu.+ 37 Vese vakadya, vakaguta, uye vakaunganidza zvakasara zvikazadza matengu manomwe.+ 38 Vakadya vaiva varume 4 000, uyewo vakadzi nevana. 39 Akazoendesa vanhu vacho, akapinda muchikepe, akasvika munharaunda yeMagadhani.+